Wararka Talooyinka Ganacsi Wararka iyo Sheekooyinka by Alietc.com - Alietc.com
Soo-saare ma yahay alaab-qeybiye? - Waxoogaa Caawimaad ah!
Aad ayey u adkaan kartaa in go'aan laga gaadho haddii soo saaruhu yahay alaab-qeybiye iyo in kale. Way adkaan kartaa in la ogaado cidda dhabta ah ee alaab-qeybiyaha ah iyo yaa alaab-duuliyaal-habeenba mid keena. Macluumaadka soo socda ayaa kaa caawin kara inaad go'aansato cidda alaab-qeybiye ah iyo cidda aan ahayn. Jumladle waa shirkad iibsata alaabada […]Read More
Waa maxay Nidaamka Wax Soo Saarka?
Soo-saaristu waxay ku lug leedahay arrimo badan oo saameeya sida wax soo saar ama adeeg u noqdo. Arrimahan waxaa ka mid ah nashqadda, horumarinta, wax soo saarka iyo adeegga wax soo saarka ugu dambeeya. Nidaamka wax soosaarku wuxuu ka bilaabmaa marxaladda naqshadeynta, oo qaadata bilo badan. Waxyaabo badan ayaa ku lug leh marxaladan oo ay ku jiraan baahida isticmaalaha dhamaadka, daraasadaha suurtagalnimada, […]Read More
Ku Bilow Ganacsigaaga Bixiyeyaasha Saxda ah
Sideed ku ogaan kartaa noocyada alaab-qeybiyeyaasha ee aad u baahan tahay? Haddii aadan sheegi karin, waxay noqon kartaa shaqo badan in la ogaado. Hal shay oo ay tahay inaad tixgeliso waa meesha aad ku taal. Maaddaama ay jiraan meelo badan oo kala duwan oo aad ku iibin karto badeecadaada, waxaa muhiim ah in la ogaado halka […]Read More
Sideen Ku Helaa Bixiyeyaasha?
Waxaa jira siyaabo badan oo loo helo alaab-qeybiyeyaal, laakiin dhammaantood ma sahlana in la raaco. Waa kuwan su'aalo yar oo ay tahay inaad weydiiso shirkad kasta oo aad ka fikirayso inaad ka hesho meheraddaada. Kani waa hagitaankooda sidii kubbadda loogu rogi lahaa jihadaada. Maxay shirkadani qabataa? Marka hore, weydii […]Read More
Bixiyeyaasha v Vorsors
Markii aan ka hadlayno farqiga u dhexeeya iibiyaha iyo alaab-qeybiyaha waxaan ka hadlaynaa erey inta badan ku jira labada erey oo mid ah mararka qaarkoodna iibiyuhu waa alaab-qeybiyaha sidoo kale. Adduunyada maalgashiga dhismaha ganacsiga, iibiyuhu waa qof alaab ama adeeg siiya milkiilaha. Alaab-qeybiye […]Read More
Ma sahlan tahay in laga helo Suuqa Suuqa?
Sidee qofku u ogaanayaa cidda ay yihiin alaab-qeybiyeyaasha suuqa wax soo saarka? Su'aashu way fududahay laakiin dad badan oo ku cusub ganacsiga badiyaa ma weydiiyaan alaab-qeybiyeyaasha taasna waxay keentaa inay kudhacaan shirkadaha wax iibiya. Internetka ayaa hadda loo tixgeliyaa inuu yahay mid ka mid ah ilaha waaweyn […]Read More
Alaab-qeybiyeyaasha Keliya Maaha Wax Soosaar!
Yey yihiin alaab-qeybiyeyaasha suuqa wax soo saarka? Tani waa su'aal dadku caadi ahaan isweydiiyaan, haddana jawaabta uma helaan wax aad u fudud in la helo. Waqtiyada qaarkood, xitaa waan waayi karnaa diiradeena si aan u ogaano cidda ay yihiin alaab-qeybiyeyaasha dhabta ah. Laakiin ka hor intaanan gelin magacyada dadka waxaan […]Read More
Bixiyeyaasha Suuqa Waxsoosaarka
Marka, sidee ku ogtahay cidda ay yihiin alaab-qeybiyeyaasha suuqa wax soo saarka? Tani waa su'aal ay wajahayaan shirkado badan oo bilow ah. Waxaa jira aragti guud oo laga qabo in howsha waxsoosaarka waxsoosaarka ay tahay inay la yimaadaan wax soo saar wanaagsan oo suuqa dhaqaajin doona. Tani waa run, laakiin soosaarayaashu waa inay sidoo kale noqdaan […]Read More
Xagee Ka Heli Kara Bixiyeyaasha Dukaankayga Khadka Tooska ah?
Waxaa jira siyaabo badan oo aad ku heli karto alaab-qeybiyeyaasha dukaankaaga internetka. Maqaalkani wuxuu diiradda saarayaa dhowr siyaabood oo caan ah oo aad isticmaali karto. Waxa ugu horeeya ee aad dooneysid inaad sameyso ayaa ah inaad hesho liiska shirkadaha awooda inay ku siiyaan provideRead More